Iyo IFTTT app ndeyekupedzisira kugadzirisirwa iOS 9 | IPhone nhau
Zvishoma nezvishoma uye zvishoma mashandiro ari kutanga kuvandudzwa kuti arege kuwirirana neshanduro dzekare dzeIOS. Mazuva mashoma apfuura, takaburitsa chinyorwa umo isu takakuzivisa iwe nezve inotevera inovandudza yeSuper Mario Run, chishandiso chisingachazowirirana neshanduro dzekare dzeIOS 11, saka ichamira kushanda zvese zviri zviviri iPhone 5 uye iPhone 5c.
Ikozvino yave mukana we IFTTT application, chishandiso icho chingori changowana chigadziriso chitsva, chigadziriso umo chinozivisa vese vashandisi veichi chishandiso kuti chichava chekupedzisira kugadzirisa chinoenderana neIOS 9, kuitira kuti kana zuva Nhasi uchiri paIOS 9, chimwe chinhu chingangoitika kana uine iPhone 4s, iwe unofanirwa kuyeuka kuti iko kunyorera hakuchazogashira zvidzoreso.
Chirevo IFTTT zvinoreva Kana Izvi Zvino Izvo, izvo zvakashandurwa muchiSpanish uye kwatiri tinonzwisisana zvinoreva Kana izvi zvikaitika, ita izvozvo. IFTTT inotibvumidza kuita mashandiro, pasina mushandisi kupindira chero nguva. Semuenzaniso, kana isu tikatambira email ine chinamatira, tinogona kushandisa IFTTT kamukira kuitira kuti chinamato ichocho chakachengetwa muakaundi yedu yeDropbox
Iyi yazvino inogadziridza inoenderana neIOS 9, inogadzirisa zvimwe zvinokanganisa izvo vamwe vashandisi veIOS vange vachipa nevanosangana uye kalendari application. Uye zvakare, masevhisi matsva anoenderana neiyi yemahara chikuva akawedzerwa, pakati pazvo patinowana: Nokia Kurara, Meross, Moodo, Hive Active Plug, SmarTap Shower, OhmConnect, pakati pevamwe. Kana iwe usina chinangwa chekumutsiridza yako iPhone, sekuratidzira kwazvino IFTTT kugadzirisa, pTinogona kuramba tichishandisa sevhisi kuburikidza newebsite yeisevhisi iyi, webhusaiti kwatinozowana iwo masevhisi akafanana aripo iye zvino kuburikidza nechishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo IFTTT app ndeyekupedzisira kugadzirisirwa iOS 9
Phillips inopa iyo yekuvandudza kune Hue mababu, iyo hombe kusvetuka yavaida